မန်းဂေဇက်စုပေါင်းအလှူ သာဓုခေါ်လို့ ကုသိုလ်ယူ (ဓာတ်ပုံ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မန်းဂေဇက်စုပေါင်းအလှူ သာဓုခေါ်လို့ ကုသိုလ်ယူ (ဓာတ်ပုံ)
မန်းဂေဇက်စုပေါင်းအလှူ သာဓုခေါ်လို့ ကုသိုလ်ယူ (ဓာတ်ပုံ)
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Jan 29, 2012 in Community & Society, Society & Lifestyle | 13 comments
မန္တလေးဂေဇက် ရဲ့ ပထမဆုံး အလှူမှာ ကုသိုလ်ပါဝင်ဖို့ဟာ လွဲနေတာ
လွဲကြောင်းစုံတော့ ပြောပီးဘီ ။ ဒီဟာက ဘဏ်ချလံကို ဓာတ်ပုံလုပ်ပီးတင်တာ
ကျန်ခဲ့လို့ ရွာထဲက မမ ပေးတဲ့ အကြံအတိုင်း ပို့စ်အသစ်တင်တာ။ ဒဂျီးကမှ
သားတို့လို ရွာသားအသစ်လေးကို တင်ပြီးသားပို့စ် အဲဒစ်လုပ်ခွင့်မပေးတာ။
အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော့….
(မetone ရေ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အကြောင်းကြားပါတယ်)
Sar Du, Sar Du, Sar Du. for your donation.
Let’s try one after another.
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ရွာစားကျော်ရေ။
စိတ်တူလက်တူ ပါဝင်တာကိုလည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
ရွာစားကျော်ရဲ့ ကုသိုလ်အတွက်လဲ သာဓုပါ။
တယောက်ခြောက်ကျပ်ဘိုး ပါရမီဖြည့်ရရှာတဲ့ သူကြီးအတွက်လဲ သာဓုပါ။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါရှင်။
နောက်ဆို ဒါထက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ။
ဘဏ်အကောင့်မှာ တလုံးပိုနေတယ် .. နောက်ဆုံးက လေးမပါဘူး ..ဟီးဟီး … ကိုယ့်လက်ရေးနဲ့ကိုယ်မြှားလေးထိုးထားတာကို … လေးဆိုပြီး ဟိုပို့စ်ထဲ ထည့်တင်လိုက်တာ .. ဦးဦးပါလေရာ သတိပေးတော့မှသိတယ် … အခုတော့ ပြန်ပြင်ထားတယ် .. ။ ဘဏ့်နိမ်းကတော့ … လူနာမည်မှ ရမယ်ဆိုလို့ အကောင့်သွားဖွင့်တဲ့ AKKO သူ့နာမည်နဲ့ လုပ်ခဲ့တယ် … ။
… အထုမှ သိဘီ ….. နာ့ဖုန်းနံပါတ် ထည့်ပေးယိုက်လို့ ဘဏ်က နာ့ရှီ ဆက်တာဂိုး … ။
သြော် ဘဏ်ကလွှဲပီး၊ ပို့စ်တင်ပီးတဲ့ထိတောင် လွဲချက်ကကျန်နေသေးသကိုး
ဘဏ်အကောင့်မှာ တလုံးပိုနေတာ စာရင်းထဲကော ၀င်ရဲ့လားဗျာ
တော်ကြာ သူများအကောင့်ထဲရောက်သွားလို့ ထပ်လွဲနေဦးမယ်
သာဓုသာဓုသာဓုပါ။ ပိုက်ဆံလဲ လှူ သလို 12ရက်နေ့သွားမယ့် အခါ။ ဝေယျာဝစ္စပါကုသိုလ်ယူနိုင်ပါစေ။
ယခုအချိန်ထိ ကောက်ခံရရှိငွေပေါင်း ခြောက်သိန်း ခုနှစ်သောင်း သုံးထောင် တိတိရရှိပြီး ဖြစ်ပြီး … ထပ်မံထည့်ဝင်ဖို့ ဆက်သွယ်လာသူ လေးငါးယောက်ရှိပါသေးတယ် … ။ ဖုန်းဆက် အင်ကွာရီလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပိုက်ဆံ လက်ထဲ၊ဘဏ်ထဲ (တကယ်) မရသေးလို့ … ၄င်းတို့ကို စာရင်းထဲ ထည့်ပေါင်းထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး …. ။
ဘဏ့်ကို တိုက်ရိုက်ငွေလွဲသူများအ နေဖြင့်လည်း အပမ်းမကြီးဘူးဆိုလျှင်ဖြင့် …မိမိတို့ရဲ့ ဂျီမေးလ်ကနေ … အလှူရှင်နာမည်နဲ့ အလှူငွေပမာဏလေးကို etone.mandalaygazette@gmail.com ကို ပို့ပြီး အကြောင်းကြားပေးလို့ရပါတယ် .. ဒါမှ သာ လတ်တလော အလှူငွေ ကောက်ခံမှု အခြေနေ update ဖြစ်တိုင်းမေးလ်ပို့တဲ့အခါ … ဆက်သွယ်ပြီးအလှူရှင်များဆီကို ပို့ပေးနိုင်မှာပါ ။
ရွာသူရွာသားအားလုံးရော ၊ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူလှူဒါန်းပေးကြသူအားလုံး စိတ်ဧ။် ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်ဧ။် ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေနော် ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလို အလွဲလွဲအမှားမှားကိုတောင်ရအောင်လှူတဲံရွာစားကျော်….. ရွားစားကနေမြို.စား၊နယ်စား တွေထိ ရာထူးတိုးပါစေ ဟေဟေဟေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလို အလွဲလွဲအမှားမှားကိုတောင်ရအောင်လှူတဲံရွာစားကျော်….. ရွာစားကနေမြို.စား၊နယ်စား တွေထိ ရာထူးတိုးပါစေ ဟေဟေဟေ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အလှူလေးလည်း မြိုင်ဆိုင်လာပြီိ။ သာဓုများကိုလည်း ခေါ်နေပါတယ်။ လူနိုင်သူတွေ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လှူတာ အရမ်းဝမ်းသာ လှိုက်လှဲမိပါတယ်။